“Blog Action Day” Amin’ny 16 Oktobra: Raha Miteny Aho Hoe #TsyFitoviana, Dia Miteny Ianao Hoe…? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2014 17:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Swahili, Español, polski, Nederlands, Esperanto , srpski, English
Fahitàna ny hoalan'ny tora-pasik'i Chowpatty, Mumbai any amin'ny sasany amin'ireo tany lafo indrindra eran-tany. Sary an'ny mpampiasa Flickr, Shreyans Bhansali, tamin'ny 9 Janoary 2007. (CC BY-NC-SA 2.0)
Ambarao amin'izao tontolo izao ny dikan'ny tsy fitoviana aminao. Zarao ny tantaranao, zarao ny fomba fijerinao, miadia hevitra ary tohano izany. Ataovy izany ny 16 Oktobra ho avy izaanatin'ny “Blog Action Day” miaraka amin'ireo blaogera an'arivony hafa.
Miraisa hina ry blaogera!
Nanomboka ny taona 2007, namory ireo blaogera maneran-tany ny “Blog Action Day” mba hampipoitra ireo lohahevitra lehibe eran-tany. Isika miaraka no nanamarika ny tontolon'ny blaogy tamin'ireo lahatsoratra an'arivony momba ny rano, ny fiovan'ny toetrandro, ny fahantrana, ny sakafo sy ny herin'ny atao hoe “isika”. Fanapahan-kevitra tsara be izany, izay manangana hetsika maneran-tany, sy vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena, ary adihevitra goavana. Ary amin'ity taona ity indray dia mbola mirehareha ny Global Voices Online fa mpiara-miasa ofisialy.
Raha miteny aho hoe tsy fitoviana, miteny ianao hoe …?
Mitarika fiaraha-miasa maro ny teny hoe tsy fitoviana. Mety ho betsaka loatra aza; izany indrindra no antony mahatonga azy ho lohahevitra laharam-pahamehana ka hatao vaindohan-draharaha. Mety ho resaka fahasamihafàna eo amin'ny lafiny fitsaboana io tsy fitoviana io, na koa ny tsy fitoviana ara-toekarena, ny tsy fitoviana amin'ny ankapobeny, ny tsy fitovian'ny fanabeazana, ny tsy fitovian'ny fiaviana, ny tsy fitovian'ny fitaovam-pananahana, ny tsy fitovian'ny fiarahamonina, ary ireo vondron-javatra maro mbola tsy itovizana. Asehoy eo amin'ny blaoginao ny fomba fijerinao sy ireo zavatra efa niainanao, ary ‘ndeha isika hiara-hijoro ka hiady hevitra momba ny tsy fitoviana amin'ny fomba fisehony rehetra.
Mandraisa anjara amin'ny #Blogaction14
Ho fandraisana anjara anatin'ny “Blog Action Day”, afaka soratanao ao amin'ny vohikalan'ny Blog Action Day ny anaran'ny blaoginao – ary marihina fa afaka manoratra ny lahatsoratrao amin'ny teny rehetra ianao, ary mety avokoa izay firenena iavianao. Amin'izao fotoana anoratana izao, mpandray anjara 1032 avy any amin'ny firenena 108 no nanoratra anarana mba handray anjara. Ao amin'ny twitter, jerijereo matetika ireo tenifototra #Blogaction14, #Tsyfitoviana, #16Okt.
Ny 16 Oktobra, hitanisa ireo lahatsoratra avy any amin'ireo mpamatsy ny Global Voices maneran-tany izahay — aza miala!